သြစတြေးလျ၊ အာရှနဲ့ US က အသုံးပြုသူအတော်များများ မှာ Facebook ပျက်ကျသွားခဲ့
9 May 2017 . 6:56 PM
တစ်ကမ္ဘာလုံးအသုံးပြုနေတဲ့ လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီး Facebook ဟာ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလောက်မှာ သြစတြေးလျ၊ အာရှ နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဒေသတစ်ချို့မှာ ပြတ်တောက်ကျသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူ သန်းပေါင်းများစွာဟာ ဒီအကြောင်းကို Twitter မှာ သတင်းတွေတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Facebook ကတော့ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သတင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို Crash ဖြစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုတော့ မသိရှိရသေးပဲ DownDetector ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ Issues ၂၅၄ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူတွေထဲက ၅၉ရာခိုင်နှုန်းဟာ လုံးဝ မှောင်အတိဖြစ်သွားခဲ့ကာ ၃၆ရာခိုင်နှုန်းကတော့ Logging ဝင်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခြား ၄ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ပုံနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အသုံးပြုသူတွေက Log In လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Error Message တွေ တက်လာပြီး “Sorry, something went wrong. ‘We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can’ လို့ ရေးသားထားတာဖြစ်ကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။
Issues တွေကို Resolved လုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ Site က ပြန်တက်လာခဲ့ပြီး ဒီအတွက် သတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ Facebook က မှတ်ချက်မပေးသေးပါဘူး။
သွစတွေးလြ၊ အာရှနဲ့ US က အသုံးပွုသူအတျောမြားမြား မှာ Facebook ပကျြကသြှားခဲ့
တဈကမ်ဘာလုံးအသုံးပွုနတေဲ့ လူမှုကှနျယကျဝကျဘျဆိုကျကွီး Facebook ဟာ ဒီနမေ့နကျပိုငျးလောကျမှာ သွစတွေးလြ၊ အာရှ နဲ့ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုက ဒသေတဈခြို့မှာ ပွတျတောကျကသြှားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ လူမှုကှနျယကျအသုံးပွုသူ သနျးပေါငျးမြားစှာဟာ ဒီအကွောငျးကို Twitter မှာ သတငျးတှတေငျခဲ့ကွပါတယျ။
Facebook ကတော့ သွစတွေးလြ၊ နယူးဇီလနျ၊ ဂပြနျ၊ မလေးရှား၊ အိန်ဒိယ နဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုတှမှော ဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ သတငျးထုတျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို Crash ဖွဈသှားရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကိုတော့ မသိရှိရသေးပဲ DownDetector ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ Issues ၂၅၄ခုဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီး အသုံးပွုသူတှထေဲက ၅၉ရာခိုငျနှုနျးဟာ လုံးဝ မှောငျအတိဖွဈသှားခဲ့ကာ ၃၆ရာခိုငျနှုနျးကတော့ Logging ဝငျတဲ့နရောမှာ ဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ တခွား ၄ရာခိုငျနှုနျးကတော့ ပုံနဲ့ပါတျသကျတဲ့ ပွသနာတှကေို ဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
အသုံးပွုသူတှကေ Log In လုပျလိုကျတဲ့အခါမှာ Error Message တှေ တကျလာပွီး “Sorry, something went wrong. ‘We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can’ လို့ ရေးသားထားတာဖွဈကွောငျးလဲ သိရပါတယျ။
Issues တှကေို Resolved လုပျပွီးနောကျမှာတော့ Site က ပွနျတကျလာခဲ့ပွီး ဒီအတှကျ သတငျးအသေးစိတျကိုတော့ Facebook က မှတျခကျြမပေးသေးပါဘူး။